Raha misy vehivavy manamora ny fitondrana vohoka, ny dokotera dia mandefa fanafody fitsaboana, ohatra, ny giles isan-karazany na ny fitantanana ny oxytocine. Ny mpitrandraka an-jatony - ny fahateren'ny reny mandritry ny fiterahana, raha tsy misy fotoana ahafahana mampiadana sy mampihetsi-po kokoa na mitsangana sy mandeha eny amin'ny lalantsara, izay manampy ny vehivavy maro hampihena ny fanaintainan'ny asa aman-draharaha mialoha ny fotoana hahaterahana akaiky.
Misy ny vahaolana amin'ny ankabeazan'ny ady, tsy miandry ny fampidirana fanafody artifisialy. Eritrereto ny fomba azo antoka sy mahomby hampisy ady any an-trano.
Io fomba io no mahazatra sy mahomby indrindra mba hiantsoana ady. Ny sperm lahy dia misy ny prostaglandina ao amin'ny biôlôjika, izay manampy amin'ny fanomanana ny tranon-kibo amin'ny famoahana amin'ny alàlan'ny fanalefahana azy. Ankoatra izany, ny orgasme amin'ny vehivavy dia miteraka ny fifindran'ny tranonjaza, izay mety hiteraka ady.
Ity fomba fitsaboana ity dia misy ihany koa ny fanoherana - ny presia na ny toerana misy ny placenta, ary koa ny aretina amin'ny mpiara-miasa.
Zava-dehibe ary tsy "manadino" amin'ny firaisana ara-nofo - aza tsy miraharaha loatra an'izany, mba tsy hamitahana ny toeram-ponenana vao haingana. Tsy azo atao ny manao firaisana raha efa maty ny corky, satria manimba ny bakteria tsy ilaina izy io, izay niaro an'io zaza io nandritra ny 9 volana.
Inona no tokony hatao mba hanombohana ady, raha efa tonga ny fotoana, nefa tsy misy dingana? Mila mandroso bebe kokoa ianao - mandehandeha mandritra ny fotoana lava (tsy mandeha lavitra loatra na any amin'ny hopitaly), afaka mandeha hiantsena ianao, miaraka amin'ny fividianana akanjo mahafinaritra amin'ny zazakely. Mandeha eny amin'ny tohatra, mpikiky, ny trano fanadiovana ankapobeny dia safidy rehetra ho an'ny fikarakarana ara-batana. Na izany aza, tsy tokony hohadinoina ny fepetra fitandremana: zava-dehibe ny tsy handratra izany ary tsy hanimba ny tenanao sy ny zanakao. Noho izany, raha misy ny fahatapahana aloha vao manomboka ny placenta, ny dokotera dia tokony hiasa amin'ny sehatry ny seza fisaka ilaina.
Fanadiovana ny tsinainy
Ny fialonana tsotra dia mety miteraka ady. Ny hodi-doko manadio koa dia natao tao amin'ny hopitaly momba ny fiterahana mialoha ny nandefasana azy. Aorian'izany, mankalaza ny fiandohan'ny ady "tena izy" ireo reny.
Tsy voamarina foana ny fampiasana ny sakana ho an'ny fizakan-tena ho an'ny tenany, satria mety hitarika ho amin'ny fahalotoan'ny vatana izany. Noho izany, tsara kokoa ny manakana ny fikarakarana volom-bahoaka amin'ny endriky ny menaka solifara na ny menaky bozaka.
Amin'ny ankapobeny, ny fiantsoana an'io ady io dia ny solika sy ny jasmine. Mila mila miaina ny rivo-doza fotsiny ianao - mampahateza ny fisian'ny asa.
Manaova fanatanjahan-tena amim-pitandremana tsara. Miaraka amin'ny fanentanana azy ireo, dia manasitrana ny hormonina oxytocine ny vatany, izay mamporisika ny fanakanana ny uterine.
Raha toa ka nitranga izany dia nanomboka ny ady, ary nivory ianao ary tonga tany amin'ny hopitaly, nifatotra tamin'ny fandefasana aloha, ary nitsahatra tampoka ny fahatongavana, tsy hatahotra ary tsy ho tezitra. Angamba, izy ireo dia vao voalohany amin'ny zaza vao teraka na ireo antsoina hoe "ady diso". Afaka miseho sy mandalo andro maromaro alohan'ny hiterahany izy ireo. Raha tena diso izy ireo, dia azo esorina amin'ny fampiasana fitsaboana nentim-paharazana toy ny tsy misy shpy. Ny organism miaraka amin'ireo "ady" toy izany dia miomana amin'ny fiterahana ary tsy mila manelingelina an'io dingana voajanahary io, maka fanafody izay miteraka fifandirana na amin'ny fomba hafa dia miteraka antso ho amin'ny fananganana tena izy.
Eto foana ny fanontaniana: ahoana no ahafahantsika mahazo ny tena ady? Mora - raha tsy mandeha ny ady rehefa avy nalaim-panahy antispasmodics, dia tsy hijanona izy ireo mandra-piterahanao. Izany hoe raha lazaina amin'ny teny hafa dia tonga ireo ady tena izy ireo ary kely dia kely ny fotoana hahatongavanao amin'ny farany ny zanakao efa nandrasana ela.
Famonoana aorian'ny fiterahana
Biomechanism ny fiterahana
Ny vokatry ny fizarana tany Kaisaria ho an'ny ankizy
Asphyxia ny zaza vao teraka
Rahoviana no afaka mametraka kofehy aho aorian'ny fiterahana?
Ny fizarana tranonjaza dia natao taorian'ny fizarana seza
Fanairana ny asa
Afaka bevohoka ve aho ao anatin'ny iray volana aorian'ny fiterahana?
Taorian'ny karazana fialan-tsasatra mahatsikaiky
Ahoana no hiarovana azy rehefa teraka ny reny mitaiza kely?
Episiotomy - fanasitranana
Ny fitsaboana ny mastopathy amin'ny herbs
Hazo Christmas tree felt
Gazpacho Soup avy amin'ny voatabiha - recipe
Ny tsenan'i San Miguel
Manadio ny ravin'ny pastèque
Triceps - fampiharana ny vehivavy
Ny rano mandevona amin'ny fisotroan-toaka
Inona ireo fanahy hanatrika ilay zazavavy?
School of Ancient Rome: Ahoana no nianatra ny zanaky ny BC?
Soup miaraka amin'ny holatra sy tsimokaretina voasesika
Silicone ho an'ny fanadiovana rano
Ahoana no nahalavoan'i Angelina Jolie?
Fifamaliana: nivoaka i Jane Seymour sy Paris Hilton mitafy akanjo Oscar de la Renta
Shoes - fahavaratra 2015